Rabshado ay dad badan ku dhinteen oo kadhacay Itoobiya, qowmiyad doonaysa inay goosato – Radio Daljir
Rabshado ay dad badan ku dhinteen oo kadhacay Itoobiya, qowmiyad doonaysa inay goosato
Luulyo 21, 2019 7:00 b 0
Ku dhowaad todobo iyo toban qof ayaa ku geeriyooday rabshado dhexmaray ciidamada ammaanka ee Itoobiya iyo kooxo u dhaqdhaqaaqa in dowlad goboleed loo aqoonsada qowmiyadda Sidama ee dalkaasi, sida laga soo xigtay saraakiisha dowladda iyo masuuliyiinta isbitaalada.
Sarkaal katirsan maamulka deegaanka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in 13-qof lagu dilay meel u dhow magaalada Hawasa oo 275km koonfur uga toosan magaalada Addisababa, waxaaana maalinimadii Jimcihii u geeriyooday dhaawacyo soo gaaray afar dibadbaxyaal ah.
13-ka qof ee u dambeeyey oo shacab ahaa ku sungaa deegaanka Wotera Rassa oo 27km ujirta magaalada Hawasa,
“Dadku markay arkeen inay isu soo uruureen meel waddo ah ayaa loo maleeyey inay dhibaato abuurayeen, waana sababta loo dilay” ayuu sarkaal deegaanka ah u sheegay wakaaladda Reuters.
Sidama ayaa ah qowmiyadda ugu balaaran Itoobiya ee gobolka ku yaala koonfurta dalkaasi, waxaana ay dalbanayeen in loo aqoonsado dowlad goboleed, taasi oo ka mid ah caqabadaha uu wajahayo raysal wasaaraha Itoobiya Abey Axmed.
Itoobiya ayaa horay u qaybsanayd sagaal dowlad goboleed, dastuurka ayaa dhigaya in dowladda looga baahanyahay inay qabanqaabiso afti , haddii qowmiyad loo ogolaanayo inay hesho dowlad goboleed sanad gudiiisa.
Dhaqdhaqaaqa xoraynta Sidama ee (SLM) ayaa doonaysa dowlad goboleed, waxaana dowladda ay ugu yeertay inay dib u dhigin qorshaha ay ugu soo biirayaan dowlad goboleedyada dalkaasi Itoobiya.
Saaka & Dunida iyo Jaamac Cabdiraxmaan Axmed, Daljir Gaalkacyo (dhegayso)